တ မိတ်ဆွေ အသစ် သို့မဟုတ် အခုမှ စတွဲခါစ သမီးရည်းစားတွေ အနေနဲ့ တစ်ဖက်လူရဲ့ Darkside ကိုသိလိုရင် ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို မသိမသာနဲ့ မေးကြည့်သင့်ပါတယ် ။
(၁) ဘယ်လိုအရာတွေက သူ့ကို တွေက သူ့ကို စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်စေသလဲ?
လူတွေရဲ့ စိတ်ကို သိလိုတဲ့အခါမှာ သူတို့ ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ အရာတွေကို သိဖို့ကြိုးစားပါ ။ ဒါဆို ကိုယ့်ဖက်ကလည်း ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး သူဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာ အကဲခတ်နိုင်ပါတယ် ။
(၂) သူ့မိသားစု နဲ့ သူနဲ့ မကြာခဏ ကတောက်ကဆ ဖြစ်တတ်လား?
မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အဆင်မပြေသူတွေဟာ အပြင်လူတွေ နဲ့ဆက်ဆံ ရာမှာလည်း အခက်အခဲရှိတတ်ပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အဖြေပေါ်မူတည် ပြီးကိုယ့်ဖက်က ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
(၃) ဘဝမှာ အဆိုးရွားဆုံး အမှားတစ်ခု
ဒီမေးခွန်းကိုတော့ သူ့ဖက်က အမှန်အတိုင်းဖြေ ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ် ။ သို့ပေမယ့် ဒီ အဖြေဟာ သူ့ ဘဝမှာ နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှ မကြုံတွေ့ချင်တော့တဲ့အခြေအနေ တစ်ခုဖြစ်လို့ ကိုယ့် သိထားရင် နှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေးအတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်စေပါတယ် ။
(၄) လက်စားချေ တာဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ထင်လား?
သူ့ဖက်က အမြင်က လက်စားချေတယ် ဆိုတာ မကောင်းမွန်ဖူး ၊ မဖြစ်သင့်ဘူး ဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ စိတ်သဘောထားရှိသူပါ ။ တကယ်လို့ လက်စားချေတာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းပဲ ဆိုရင်တော့ သူနဲ့ ပြောဆက်ဆံရာမှာ သင်သတိထားစောင့်ထိန်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
(၅) သူသဘောကျ တဲ့ Ideal Person
လူတစ်ယောက်ရဲ့ Ideal Person ဟာ သူ့ ဘဝမှာ ဖြစ်လိုတဲ့ / ဖြစ်ခွင့်မရသေးတဲ့ အနေအထားကို ထင်ဟပ်စေပါတယ် ။ ဥပမာပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ကလေး ဘဝမှာ Power Ranger ကို သဘောကျခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင် Power Ranger ဖြစ်အောင် ကြိုးစားချင်ခဲ့ သလိုပါပဲ ။
အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ အမျှ သင် လျစ်လျူ ရှူ့ပစ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ အရာတွေ
ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ပါတနာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ?